မဒေါင်းလုပ် Game မအဘို့ Windows
အိမ်နီးချင်းမင်္ဂလာပါ2Steam မှာ! Hello Neighbor2Alpha 1, PC တွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်ပျောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ Hello Neighbor2Alpha 1 ကိုမဖြန့်ချီခင် free download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Hello Neighbor, PC နှင့် mobile...
PES 2021 Lite သည် PC အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခမဲ့ဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုရှာနေပါက eFootball PES 2021 Lite သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ PES 2021 Lite PC သည်အခမဲ့ဘောလုံးကစားပွဲကိုမျှော်လင့်သူများအတွက်ပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးပွဲ eFootball PES 2021 Lite ကို PC, consoles နှင့် mobile တို့တွင် FIFA ကဲ့သို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးယခု...
လွတ်လပ်သောဂိမ်း developer Rovio မှထုတ်ဝေသော Angry Birds သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးကစားရလွယ်ကူသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအားမြင့်မားသောဖျော်ဖြေမှုကိုပေးသည်။ ဂိမ်း၏ကွန်ပျူတာဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောပျော်ရွှင်မှုကိုလုံး ၀ ခံစားခွင့်ပြုသည်။ Angry Birds...
အကောင်းဆုံးလယ်ယာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်း Farming Simulator သည်၎င်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဂရပ်ဖစ်၊ ကစားနည်း၊ အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ GIANTS Software မှတီထွင်ခဲ့သော #1 လယ်ယာကစားနည်း Farming Simulator 22 သည်ရာသီအလိုက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများနှင့်အတူယခုအခါစိုက်ပျိုးရေး၊...
Secret Neighbour သည် PC ကွန်ပျူတာနှင့် mobile တို့တွင် stealth ထိတ်လန့်ထိတ်လန့်သောကစားသမားများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ Secret Neighbour ကို Download လုပ်ပါ Secret Neighbor...
၂၀၁၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PlayStation3နှင့် Xbox 360 တို့အတွက် GTA စီးရီးကိုဖန်တီးသူ Rockstar က Grand Theft Auto5ကို GTA စီးရီး၏နောက်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သော GTA5ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ GTA5ဂိမ်းအသေးစိတ် Rockstar က ၄ င်းသည် console version များအပြီးတွင်ဂိမ်း၏ PC version ကိုကြေငြာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် GTA5PC version ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊...
FIFA 22 သည် PC နှင့် consoles များတွင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ EA Sports FIFA 22 သည်ဘောလုံးစွမ်းအင်ဖြင့်ဆောင်သောကြွေးကြော်သံဖြင့်စတင်ခြင်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းတိုးတက်မှုများနှင့်ရာသီဥတုတိုင်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသောရာသီနှင့်အတူဂိမ်းကိုအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ FIFA 22 PC သည် Steam တွင်ပါ ၀ င်သည်။...
PUBG ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ PUBG သည်စစ်ပွဲဆင်နွှဲသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင် Windows ကွန်ပြူတာနှင့်မိုဘိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည်။ PUBG တွင်မိုဘိုင်းနှင့်ပီစီနှစ်ခုလုံးတွင်အဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သောကစားသမားအရေအတွက်တိုးပွားစေသည့်အတွက်လူတိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၀ င်းဒိုးပလက်ဖောင်းတွင် PUBG PC (download)...
Happy Wheels ကိုတူရကီဘာသာဖြင့် Happy Wheels” ဟုလည်းလူသိများသည်။ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ရူပဗေဒအခြေခံသည့်ကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်း၏ကွန်ပျူတာဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာမှပျော်ရွှင်သောဘီးများကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနောက်သင်တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲချက်ချင်းကစားနိုင်သည်။...
The Lord of the Rings အတွက်ဒဏ္gamesာရီထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ငါတို့သည်ဂိမ်းများစွာကစားခဲ့ကြပြီးဤအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးခြားဆုံးသောကစားနည်းများသည်အောင်မြင်သောနည်းဗျူဟာဂိမ်း Middle Earth စီးရီးဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်အပြင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်မတူညီတဲ့ဂိမ်းများစွာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်၊...
ဘောလုံးမန်နေဂျာ ၂၀၂၁ သည် PC တွင်ဒေါင်းလုပ်အများဆုံးနှင့်ကစားသောဘောလုံးမန်နေဂျာဂိမ်း၏ရာသီသစ်ဖြစ်သည်။ Football Manager 2021 ကို Steam နှင့် Epic Games Store တို့တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီးနိုဝင်ဘာလတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ သင်ဘောလုံးမန်နေဂျာဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ အရည်အသွေးနှင့်တူရကီဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းများထဲမှ ၂၀၂၁...
Cheat Engine ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Cheat Engine ဆိုသည်မှာ open source အဖြစ်တီထွင်ထားသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် cheat program တစ်ခုဖြစ်သည်။ APK သည်အလိုအပ်ဆုံး Windows 10 PC များတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၀ င်းဒိုး operating system အောက်ရှိသင်ကစားသောဂိမ်းများကိုပြောင်းလဲရန် Cheat Engine...
Vindictus သည်သင်ကစားကွင်းတွင်အခြားကစားသမားများနှင့်တိုက်ခိုက်သော MMORPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vindictus သည်ဒဏ္ologicalာရီဆန်ဆန်အရာများဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသော Vindictus အားကစားသမား ၄ ဦး အထိထောက်ပံ့နိုင်သောမြေပုံပေါ်တွင်ကစားကွင်းတစ်ခုတွင်ကစားခြင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ Vindictus သည်အောင်မြင်သောဂရပ်ဖစ်၊...
Necken သည်လှုပ်ရှားမှု - စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကစားသမားများကိုဆွီဒင်တောတွင်းသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Joccish အမည်ရှိဂိမ်းစတူဒီယိုမှတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Necken သည်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိသစ်တောများတွင်သီးခြားလွတ်လပ်စွာကစားနိုင်ပြီးဂိမ်းကစားသူများအတွက်အခမဲ့ပေးသောကစားနည်းဖြစ်သည်။...
DayZ သည် MMO အမျိုးအစား၌ online role-playing game တစ်ခုဖြစ်ပြီးကစားသူများသည် zombie apocalypse ပြီးပြီးချင်းဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုလက်တွေ့ကျကျလက်တွေ့ခံစားခွင့်ပြုပြီးရှင်သန်ခြင်း simulation တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဖွင့်ထားသောကမ္ဘာ့အခြေပြု DayZ ဂိမ်းသည်ကပ်ရောဂါတစ်ခုရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်လူသား၏အခြေအနေအကြောင်းဖြစ်သည်။...
Wolfteam သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သော FPS ဟုခေါ်သည့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါတို့ရိုက်ကူးသည့်ဇာတ်ကောင်၏မျက်လုံးများမှတဆင့်ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ Wolfteam ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်သည် ၀...
RimWorld သည်ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သော AI အခြေပြုဇာတ်ကြောင်းပြောသူမှမောင်းနှင်သောသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dwarf Fortress, Firefly နှင့် Dune တို့မှုတ်သွင်းသည်။ ဝေးလံသောကမ္ဘာတစ်ခုတွင်သင်္ဘောပျက်တစ်ခုမှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသုံး ဦး နှင့်သင်စတင်ပါ။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားများ၏စိတ်အခြေအနေများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ဒဏ်ရာများ၊...
ELEX သည် Gothic series ကဲ့သို့အောင်မြင်သောအခန်းကဏ္ဂိမ်းများကိုအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သောအဖွဲ့မှတီထွင်ထားသော open-based RPG ဂိမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Magalan ဟုခေါ်သောအံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုသော ELEX သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာသည်။ Role-playing games...
Valorant သည် Riot Games ၏ free-to-play FPS ဂိမ်းဖြစ်သည်။ တူရကီဘာသာစကားအထောက်အပံ့ပါ ၀ င်သော FPS game Valorant သည်ဂိမ်းကစားခြင်းကို ၁၄၄+ FPS အထိပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်းကွန်ပျူတာအဟောင်းများတွင်ပင်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ Valorant ကို download လုပ်ပါ Valorant သည် 5v5...
Autobahn Police Simulator2သည်ကစားသူများအားရဲအရာရှိတစ် ဦး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ဥပဒေ၏အထိန်းအကွပ်မဲ့သူဖြစ်လာရန်ခွင့်ပြုထားသော simulation game တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပ၏အလျင်မြန်ဆုံးအမြန်လမ်းသို့ကစားသမားများကိုကြိုဆိုသော Autobahn Police Simulator 2၊ ရဲဂိမ်းကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သူရဲကောင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။...
PES 2021 (eFootball PES 2021) ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြင့်သင် PES 2020 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုရနိုင်သည်။ PES 2021 PC တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကစားသမားအချက်အလက်များနှင့်အသင်းစာရင်းများပါ ၀ င်သည်။ Konami သည် PES 2021 ကို eFootball PES 2021 Season Update” ဟုလည်းဖော်ပြသည်။ PES 2021 PC ကို download လုပ်ပြီး PES ၂၅...
PES 2013 Pro Evolution Soccer 2013 သည်ဘောလုံးပရိသတ်များနှစ်သက်သောအကျော်ကြားဆုံးကစားနည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖီဖာနှင့်အမြဲနှိုင်းယှဉ်နေသော PES စီးရီးများသည်၎င်း၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးမလုံလောက်မှုတို့ကြောင့်ပြိုင်ဘက်များ၏အရိပ်တွင်ရှိနေခဲ့ပြီးလိုချင်သောအောင်မြင်မှုကိုမဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃ ဗားရှင်းအရ PES...
Battlefield 2042 သည်အီလက်ထရောနစ်အနုပညာမှထုတ်ဝေသော DICE မှထုတ်လုပ်သော multiplayer အာရုံစိုက်ထားသည့်ပထမလူသုံးသေနတ်သမား (FPS) ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပွဲထွက်လာခဲ့သည့် Battlefield4၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော Battlefield 2042 တွင်ကစားသမားများသည်မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောကမ္ဘာကြီး၌ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစစ်မြေပြင်များသို့ ၁၂၈...
SCARLET NEXUS သည်တတိယလူကင်မရာရှုထောင့်မှဂိမ်းကစားခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သောသရုပ်သဏ္playingာန်တူသည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဟာ psychokinesis ဖြင့်ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုစီရှိသောအထက်တန်းလွှာစိတ်ပညာရှင် Yuito နှင့် Kasane နေရာကိုယူထားသည်။ Brain Punk...
FIFA Online4သည်သင်၏အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာဂိမ်းနှင့်တူရကီဘာသာစကားဖြင့် PC နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားနည်း FIFA စီးရီးကိုကစားရန်အထူးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖီဖာအွန်လိုင်း4သည်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်လျှင်ဂိမ်းထဲရှိပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဝယ်ယူပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အသင်းကိုဖန်တီးရန်သူတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။...
Football Manager 2022 သည်တူရကီဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Windows/Mac ကွန်ပျူတာများနှင့် Android/iOS မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ကစားနိုင်သည်။ FM22 သည်သင်၏အနိုင်ရသည့်ဘက်ကိုရှာဖွေရန်၊ တိုးတက်သောနည်းလမ်းသစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ သင်၏ဘောလုံးစတိုင်လ်ကိုမြှင့်တင်ပြီးပရိသတ်များအတွက်အနိုင်ရသည်။ Football Manager 2022 သည် pre-order အတွက်...
Police Simulator: ကင်းလှည့်အရာရှိများသည်မင်းစိတ်ကူးယဉ်အမေရိကန်မြို့၏ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုတွေ့ကြုံရသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Police Simulator: ကင်းလှည့်အရာရှိများသည်သင်ရဲ Simulator၊ ရဲခြင်း simulation ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ Steam မှရဲဂိမ်းအသစ်။ Police Simulator: Patrol...
Ultima Online သည် ၁၉၉၇ တွင်ပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သော MMORPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂိမ်းလောကတွင်စာမျက်နှာသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Ultima Online၊ ငါတို့သည် dial-up ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်အင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့စဉ်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်တယ်လီဖုန်းလိုင်းမှတစ်ဆင့် MMORPG ဂိမ်းများမရှိမီစံများကိုသတ်မှတ်ပြီးမျိုးဆက်များစွာကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ နောက်နှစ်များတွင်...
Call of Duty: Vanguard သည်ဆုရ Sledgehammer Games မှတီထွင်ထားသော FPS (ပထမလူသေနတ်သမား) ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Call of Duty series တွင် ၁၈ ကြိမ်မြောက် Vanguard ကို PC၊ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platform များတွင်နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။...
Firefighting Simulator သည် PC တွင်သင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံး firefighting simulation ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တူရကီ interface ပါသော Fire fighting Simulator ကို Steam မှ download ရယူနိုင်ပါပြီ။ သင်သည် Windows PC တွင်ကစားနိုင်သောအရည်အသွေးကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များနှင့် firefighting Simulator ဂိမ်းကိုရှာဖွေနေပါကအပေါ်မှ Firefighting Simulator Download...
Paladins သည်ပြင်းထန်သော FPS ကစားလိုလျှင်သင်မမှတ်မိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Paladins တွင် online FPS ဂိမ်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အခမဲ့ download လုပ်၍ ကစားနိုင်သည်၊ ကစားသမားများသည် arenas သို့သွားပြီးသူတို့၏ရည်မှန်းချက်စွမ်းရည်ကိုအခြားကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ Paladins များသည်အခြေခံအားဖြင့်ငါတို့သိထားသည့် MOBA...
slither.io သည်အချိန်ကိုသတ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်မြွေဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Slither.io သည်သင်နောက်ဆုံးပေါ်အင်တာနက်ဘရောက်ဇာတွင်အခမဲ့အပြည့်အဝကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။ Agar.io တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သေးငယ်သောပြိုင်ဘက်များကိုစားခြင်းဖြင့်အကြီးမားဆုံးဘောလုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ slither.io...
Fortnite ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးကစားပါ။ Fortnite သည်အခြေခံအားဖြင့် Battle Royale mode နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့် sandbox ရှင်သန်မှုဂိမ်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့စစ်ပွဲ royal mode ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သန်းပေါင်းများစွာကစားသမားရောက်ရှိရန်နိုင်ခဲ့သည့် Fortnite, 2018 ၏လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများကိုအကြားမိမိကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ PC တွင် Fortnite...
The Elder Scrolls Online သည် MMORPG အမျိုးအစား၌အွန်လိုင်း RPG တစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာ၏ရှေးအကျဆုံး RPG ဂန္တ ၀ င်များဖြစ်သောကျော်ကြားသော Elder Scrolls စီးရီးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Bethesda သည် The Elder Scrolls series ၏ ၅ ခုမြောက် Skyrim ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ဆုများကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။...
World of Warcraft သည်ဂိမ်းကစားရုံသာမကကစားသမားများစွာအတွက်ကွဲပြားသောကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကစားသောကြီးမားသောအွန်လိုင်းသဏ္roleာန်တူသရုပ်ဆောင်ခြင်းဂိမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သော်လည်းဂိမ်းကစားသူများသည်၎င်းတွင်များစွာရှိသည်ကိုသိကြသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်စစ်မှန်သောအချိန်မဟာဗျူဟာနှင့်စွန့်စားခန်း...
Chernobylite သည်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရှင်သန်ထိတ်လန့်ဖွယ် RPG ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ချာနိုဘိုင်း၏ဖယ်ထုတ်ဇုံ၏ hyper-realistic, 3D scanned wasteland ၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝမ်းနည်းစရာအတိတ်၏အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်သင်၏ရှာဖွေမှုတွင် non-linear ဇာတ်လမ်းကိုစူးစမ်းပါ။ Chernobylite ကို download လုပ်ပါ Chernobylite သည် Farm 51 ၏ developer...
Pure Farming 2018 သည် Techland ၏ simulation game အသစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Dying Light ကဲ့သို့၎င်း၏အလွန်အောင်မြင်သောထုတ်လုပ်မှုများနှင့်ကောင်းစွာသိကျွမ်းသည်။ Pure Farming 2018 သည် Farming Simulator ဂိမ်းများကိုကျော်တက်နိုင်သောအရည်အသွေးရှိသောလယ်ယာ Simulator...
GTA San Andreas 100% Save file သည်ဂိမ်းကိုအပြီးသတ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောပြင်ဆင်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ GTA San Andreas 100% Save file ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းကိုသင်ချက်ချင်းအပြီးသတ်နိုင်ပြီးသင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းမြို့အနှံ့လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ GTA San Andreas ၁၀၀% ဒေါင်းလုပ်ချသိမ်းပါ GTA San Andreas ကိုသိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ Save...
Beast Battle Simulator ကိုရူပဗေဒအခြေခံ monster battle game တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Beast Battle Simulator တွင်ဒိုင်နိုဆောများနှင့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအကြားတိုက်ပွဲများကိုကစားသမားများအရူးတိုက်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုသော simulation game တစ်ခုဖြစ်သည်။...
PC Building Simulator သည်ကွန်ပျူတာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးတစ်ခုရလိုလျှင်ပျော်ရွှင်စရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှစ်ခုလုံးကိုပေးနိုင်သောကွန်ပျူတာတည်ဆောက်မှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PC Building Simulator၊ သီးခြားတီထွင်ထားသောဂိမ်းဖြစ်သော PC Building Simulator တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာကိုအစကနေအဆုံးတည်ဆောက်သည်။...
Warlord Saga သည်မတူညီသောတရုတ်အင်ပါယာသုံးနိုင်ငံမှစစ်သည်တော်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည့် MMORPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးနှင့်အတောက်ပဆုံးအရောင်များဖြင့်ငါတို့အားစစ်တိုက်၏သမိုင်းအငွေ့အသက်ကိုပြောပြသည်။ ဤအခမဲ့နှင့် browser...
Rappelz သည်တူရကီ MMORPG ဂိမ်းကစားနည်းသစ်ကိုရှာဖွေနေသောဂိမ်းချစ်သူများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကစားဟန်ပုံစံနှင့်အညီမှော်နှင့်စွမ်းရည်များကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောဂိမ်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းဗျူဟာများနှင့်အညီကွဲပြားသောစွန့်စားခန်းများကိုဖွင့်ပေးသည်။ ဂိမ်း၏ဇာတ်လမ်း - အစတွင်ဤအရာများပါ ၀...
Dota2သည်အွန်လိုင်း multiplayer စစ်ပွဲနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MOBA အမျိုးအစားတွင် League of Legends ကဲ့သို့သောအကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dota2သည် Valve မှထုတ်လုပ်သောထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Dota ၏အောင်မြင်မှုအပြီးအမည်အပြည့်အစုံဖြစ်သော Defense of the Ancients ။ သတိရရမည့်အချက်မှာ Blizzard ၏ Real-time မဟာဗျူဟာဂိမ်း...
Live for Speed ​​သည်သင်၏ Windows operating system ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်ကစားနိုင်သောလက်တွေ့ကျပြိုင်ကားခြင်းဂိမ်းဖြစ်သည်။ Live for Speed ​​သည်လက်တွေ့ပြိုင်ကားကစားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်လိုသောကစားသမားအားလုံးနှစ်သက်သောလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။...
BATTLESHIP APOLLO သည်ဧရာမအာကာသယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးတိုက်လေယာဉ်များအကြားကြီးမား။ နည်းဗျူဟာကျသောတိုက်ပွဲများတွင်ကစားသမားများအားနှစ်မြှုပ်စေသောသိပ္ပံဂိမ်း PC ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ BATTLESHIP APOLLO ကို download လုပ်ပါ ကစားသမားများသည်ကြီးမားသောစစ်သင်္ဘောများကိုလက်ခံရရှိကာအထောက်အပံ့ပေးသောစစ်သည်များနှင့်အတူလိုက်ပါရန်အခြားအထူးအစွမ်းအစများကို...
Microsoft ၏ flight simulator သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်ဆက်လက်ထိုးနှက်သည်။ မောက်စ်သည် Microsoft Flight ဖြင့်ပျံသန်းရန်သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်သည်။ သင်ကောင်းကင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့် Simulator သည်လက်တွေ့အကျဆုံးရလဒ်များကိုပေးသည်။ ၎င်း၏တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များဖြင့်တိုးတက်လာသော Simulator ကိုသင်အခမဲ့စမ်းနိုင်သည်။...